Iwu nkwụghachi - Shenzhen TronHoo Intelligent Technology Co., Ltd.
Ihe nbipu 3D
Ngwaọrụ Onye Okike
Banyere iwu nloghachi ụbọchị 30:
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ozi nloghachi, biko kpọtụrụ anyị n'ime ụbọchị 30 mgbe nnata.
Maka arịrịọ laghachi, biko gụọ ozi ndị a:
1. Ọ bụrụ na ndị nbipute enweghị ike imeghe, ma ọ bụ mebiri emebi mgbe anapụta, ma ọ bụ na anyị na ngwaahịa / ngwaahịa na anyị ekwekọghị, ị nwere ike n'okpuru a nloghachi / nkwụghachi arịrịọ n'ime ụbọchị 30.
2.Banyere ngwaahịa 3D ngwa nbipute anyị, anyị na-enye akwụkwọ ikike afọ 1 maka akụkụ niile dị mkpa gụnyere motherboard, moto, ngosipụta ihuenyo na akwa dị ọkụ. Onyinye, ngwa na akụkụ ndị na-adịghị ike ekpuchighị ikike.
Biko jiri obiọma kpọtụrụ ndị ahịa anyị tupu oge eruo maka nloghachi ọ bụla maka mmebi.
Ọ bụrụ na ọ bụghị nsogbu nbipute ahụ n'onwe ya, anyị agaghị ebute ụgwọ mbupu. Ma ọ bụrụ na igwe ahụ chọrọ ịlaghachi na China, anyị agaghị eburu ego ụtụ isi nke nwere ike ime.
3. Ewezuga ihe eji arụ ọrụ, ọ bụrụ na ịchọghị ngwaahịa ahụ, jụ ngwugwu ahụ, ma ọ bụ laghachi maka ebumnuche nke onwe gị mgbe ebusịrị (ga-adị na steeti ọhụrụ), ị nwere ike iburu ego a na-egosipụta nke onye na-ere ya na ọnụahịa nke ngwugwu ngwugwu.
Ndụmọdụ Dị Ọkụ:
Tupu ịlaghachi ngwaahịa ahụ, biko nye anyị foto nke ngwaahịa ndị a maka anyị.
Ozugbo a nabatara arịrịọ nlọghachi ahụ, ọ ga-ewe ụbọchị 25 ka anyị nata ngwaahịa ma hazie nkwụghachi mgbe ịbuputara anyị ngwaahịa ahụ.
Ihe Ga- Ntughari3D Mee
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị na Facebook ma ọ bụ site na email, TronHoo3D ga-achọpụta nsogbu ahụ ma zaghachi gị ozugbo enwere ike.
Anyị ga-enyere gị aka idozi nsogbu ahụ site na ịduzi gị imelite ngwaike, nye nkwado teknụzụ ma ọ bụ dochie akụkụ ngwa ahụ.
Akwụkwọ ikike nke igwe na-anọgide na-agbanweghi agbanwe.
Ngwa: motherboard, nozulu Kit, kpụ ọkụ n'ọnụ bed board, ngosi, PCB osisi, enwe 30-ụbọchị Akwụkwọ ikike (Standard 30 Day Akwụkwọ ikike)
Rịba ama: Akwụkwọ mmado na-ekpo ọkụ, nozzles, akwa magnet na ndị ọzọ na-eri ihe anaghị ekpuchi akwụkwọ ikike ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị igwe kpatara ya.
* Oge ikike nwere ike ịdị iche dịka iwu na usoro mpaghara si dị.
Ojiji nke ozi kọntaktị onwe onye
Site n'inweta mgbe ọrụ ire ere n'okpuru iwu a, ị na-enye TronHoo ikike ịchekwa ozi nkeonwe gị gụnyere aha, akara ekwentị, adreesị mbupu na adreesị ozi-e. Anyị ga-echebe nche nke ozi gị.
TronHoo na-ekwe nkwa ịkwụghachi, dochie ma rụzie akwụkwọ ikike nwere ike ịrịọ ma ọ bụrụ na ọ dabere na ọnọdụ ndị a:
Ndị na-azụ ahịa ga-akwụ ụgwọ mbupu ụgwọ n'ọnọdụ ndị a:
● Iweghachi ngwaahịa maka ihe ọ bụla ọzọ karịa nkwarụ egosiri.
● Yerzụ ahịa na mberede laghachi.
● Iweghachi ihe nke aka gị.
● Iweghachi ihe kwuru na ha nwere ntụpọ mana TronHoo QC hụrụ ka ọ nọrọ n'ọnọdụ ọrụ.
● Iweghachi ihe ntụpọ na mbupu mba ofesi.
● Ọnụ ego ejikọtara na nloghachi enwetaghị ikike (nloghachi ọ bụla emere na mpụga usoro ikike akwadoro).
Ihe ị ga - eme tupu ị nweta ọrụ ire ere
Onye nzụrụ ahịa ga-eweta ihe akaebe zuru ezu maka nzụta.
TronHoo ga-edere ihe na-eme mgbe ndị na-azụ ahịa na-edozi ngwaahịa ahụ.
Enwere akara akara nọmba nke ihe nkwarụ na / ma ọ bụ ihe ngosi a na-ahụ anya na-egosipụta ntụpọ ahụ.
Ọ nwere ike ịdị mkpa iji weghachite ihe maka nyocha dị mma.
Ihe akaebe ziri ezi nke ịzụta:
Nọmba ịtụ site na ịzụrụ n'ịntanetị mere site na ụlọ ahịa TronHoo Official